सर्वोच्चको फैसलाप्रति कार्की भन्छन्- बच्चा जन्मिएपछि विवाह पद्धति मिलेन भन्यो, अब त्यो नानीको के हुन्छ ? - Shikhar Post Shikhar Post
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसद् राम कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।
संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “दुईजनाको विवाह गरेर बच्चा जन्मियो । त्यो विवाहको पद्धति मिलेन भन्यो । अब त्यो नानीको के हुन्छ ? त्यो गम्भीर प्रश्न आएको छ । कानुनको ज्ञातासँग छलफल गर्छौं ।”
उनले नेकपाको राजनीतिक अर्थ अदालतले सिध्याउन नसक्ने बताए ।
प्रकाशित मिति : आईतवार, २३ फाल्गुन २०७७ १८:१३